कस्ता हुन्छन् सोमबार जन्मिएका मान्छे ? ज्योतिषशास्त्र यस्तो भन्छ .. – Suchana Hub
कस्ता हुन्छन् सोमबार जन्मिएका मान्छे ? ज्योतिषशास्त्र यस्तो भन्छ ..
काठमाडौं । मानिसको स्वभाव, वर्तमान र भविष्य उनीहरुको जन्मेको समय, गते, बार, तिथि, महिना लगायत कुराहरुले गर्छ भन्ने ज्योतिषी मान्यता रहदै आएको छ । सोमबार जन्मने व्यक्ति निकै संवेदनशील हुने कारण निकै चाँडै नर्भस हुन्छन् ।
सोमबार जन्मने व्यक्ति मृदुभाषी हुन्छन् भने निकै मुडी हुन्छन् । उनीहरुको लागि सम्बन्ध निकै महत्व राख्छ भने आफ्नो परिवारसँग समय बिताउन उनीहरुलाई निकै रमाइलो लाग्छ । सोमबार जन्मेका व्यक्तिहरुको स्मरण शक्ति पनि निकै तेज हुन्छ । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
सोमबार जन्मने व्यक्ति पढाईमा निकै तिक्ष्ण हुन्छन् भने आफ्नो करियरमा निकै माथि पुग्छन । सोमबार जन्मने महिलाहरु भविष्यमा निकै माया र केयर गर्ने श्रीमतीको रुपमा परिचित हुन्छिन् ।
Previous यी हुन् भगवान शिवलाई पुज्ने विधी , यसरी रिझाउनुहोस् महादेवलाई :
Next स्वास्थ्य जीवनको लागी यसरी गर्नुहोस् गहिरो निन्द्राको अभ्यास :